Italy - izwe liye eside eladonsa abahambi nge yobuhle balo nokuhlala yokuphila. Abayona ngaphandle futhi Russian. Njengoba evakashela leli zwe ngesikhathi esisodwa, abaningi ukunquma sokuthuthela lapha unomphela. E-Italy, ubunjalo amahle sezulu emangalisayo. Kodwa lapha futhi kukhona zinhlekelele kwezomnotho kanye nezinye izinkinga. Izindawo kuleli zwe has izici zayo siqu. Ngakho-ke ngaphambi uya khona, kufanele wazi ukuthi hlobo luni lokuphila e-Italy.
Izwe i-8 emazweni phezulu athuthukile kakhulu eYurophu. Kodwa ngisho nalokhu engqondweni, izinga lokuphila kwabantu lapha ngezansi pan-European. Imidiyeni engenayo emndenini kuyinto $ 25 000 ngonyaka. Lena esingaphansi e-Europe, futhi kuleli zwe has a babhekane nezinga elikhulu wawubona nomphakathi. Isilinganiso sobude bokuphila kwabantu e-Italy uneminyaka engu 83, okuyinto buvezwa engenayo.
Isilinganiso somholo ku ezahlukene 1300-2500 euro. Revenue kunqunywa esifundeni lapho bantfu bahlala khona. Ngisho ezifundazweni athuthukile kufanele amaholo ukuthi nemikhuba yazo ihluke kakhulu. Ngokwesibonelo, imali eningi kunabo bonke ukuthola baseVenice - 2500 euro. E Trento, lesi sibalo - 1950, e-Milan - 1850, futhi ngo-Verona - 1315. Lokhu umehluko incike izintengo ukudla, izembatho, indawo yokuhlala. Ngokuvamile, anemali engenayo ephezulu, lapho futhi yokuhlala ezibizayo.
Ukuze uye ezweni, kumele isicelo visa. It ivumela umuntu ngokomthetho lihlale endaweni isimo. A izivakashi visa ikhishwa ukuhlala kuleli zwe kuze kube izinyanga 3. Uma uhlela ukuba kube khona izinsuku ezingaphezu kwezingu-90, kubalulekile ukuthola yokuhlala visa. Uma ufisa ukuhlala e-Italy ukuze yokuhlala unomphela ofrmlyaetsya yokuhlala. Nini yonke imininingwane ebalulekile, isimangalo ngeke isakhamuzi. Imininingwane eyengeziwe mayelana imibhalo design ingatholakala ku- ehhovisi lenxusa.
Life e-Italy, noma ezahlukene, kodwa namanje elifana okukhona kwamanye amazwe aseYurophu. Abaningi izindlu amaNtaliyane isuselwa iqashwe. Inani Impahla kunqunywa esifundeni. amanani aphezulu, naseningizimu, nangasogwini lolwandle engxenyeni esenyakatho yezwe - ephansi.
A imali eningi abantu esichithwa Umbuso izikweletu. Izakhamuzi ukukhokhela ugesi, Ukushisa, amanzi ashisayo nabandayo, internet. Futhi izenzo ku kamabonakude izintela - mayelana 110 euros ngonyaka. Ezezindlu amaNtaliyane out ¼ we somholo wonyaka. amanani ezingubo zokugqoka mancane, futhi imikhiqizo - kunaleyo emazweni amaningi aseYurophu.
lokube nawo ezingeni lekuphila
Izinga ohlala e-Italy singachazwa ngokuthi isilinganiso Europe. Leli zwe 57% labantu baqashwe. Lesi sibalo kangako njengoba kwamanye amazwe angaphansi kweNyunyana yaseYurophu. Lokube nawo ezingeni lekuphila sabantu Italian kusifunda ngasinye sihlukile, kuye ngokuthi iholo.
Uma sicabanga ezemfundo, 58% of izakhamuzi ziye kuphothula esikoleni esiphakeme. Ubude bempilo Italy iminyaka 83, okuyinto ephakeme uma eqhathaniswa Europe. Izakhamuzi kungukuthi wanelisa ngokuphelele ezindaweni eziningi kuleli zwe.
Izwe has a ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala, okuyinto ukuziqhenya yezwe. Kunezinhlelo uqinisekisa isimo. Lezi zihlanganisa:
Jabulela umshwalense wezokwelapha Akuwona kuphela abaye wathola imali, kodwa futhi umuntu ngamunye. Yini embi ngalo njalo kwesimiso esinjalo kubhekwa ukuthi bangaki abantu abayozuza kulesi ezezimali kusukela Isikhwama jikelele, ngenxa umuntu ahlala kulo ukuba umshwalense ethile empilweni. Lokhu kubangela izinkinga eziningi bureaucratic. Kukhona zokwelashwa ezikhokhelwayo. Ochwepheshe Italian enze kahle nokuvinjelwa kwezifo umdlavuza, kanye aphathe asebekhulile.
Life e-Italy lihlukile kancane uma ucabange izinto zokuthutha. Uya hhayi isimiso, njengoba emazweni amaningi aseYurophu. Ngokuvamile kwenzeka isiteleka, ngenxa okuyinto nzima umsebenzi komhlaba, trams izitimela.
Leli zwe ebusuku amabhasi, okuyinto ithunyelwa ezingxenyeni ezahlukene eRoma, eMilan namanye amadolobha amakhulu. Ukuhamba ngesitimela kungaba kokubili ezibizayo futhi ezishibhile. Kulo mBhalo, intengo ithikithi kuyoba ngaphansana kweJalimane neFrance.
Abaningi Russian edonsela nje Italy. Indlela Yokuphila zabantu kuleli lizwe kancane ezahlukene ngisho imvelo. Italy 4 Sea: Adriatic, Ionian, Tyrrhenian futhi Ligurian. On the amabhange kukhona kokubili amawa umbukwane futhi olunesihlabathi.
Izwe has a Ingcenye eqakathekileko yomsebenzi wehlelo indawo imbozwe izintaba - the Apennines kanye Alps. Cishe zonke izindawo kuleli zwe kukhona sezulu Mediterranean, kodwa enyakatho ingxenye - Alpine, eningizimu - ezomile. Winter akuyona kubanda kakhulu, kodwa iqhwa eziqongweni zezintaba liyancibilika. Ebusika, ungakwazi kahle zenziwe skiing kanye ehlobo ukubhukuda olwandle.
Life e-Italy ngenxa umkhakha akuyona evumayo kakhulu, ngoba umoya angcolile. amabhizinisi amaningi abe udoti emifuleni. Nokho, izimo zemvelo,% 70 kuphela abantu wanelisa kuleli zwe.
Uhulumeni njalo kwenziwa imisebenzi kwemvelo. Kukhona zokulondolozwa, isabelomali kukhokhelwe eziningi izinhlelo kwemvelo. Izwe ligubha izivumelwano eziningi avimbela ekushayweni izingxenye eziyingozi emkhathini.
Indaba yokuphila iqala Italy isikhathi eside, futhi ngaso sonke isikhathi-ke kwadingeka kwenziwe ngendlela yalo. Inani Okubalulekile kuyinto umndeni zabantu base-Italy. Nje kokuba lo mbhangqwana kwadingeka izingane eziningi, futhi manje cishe yonke imibhangqwana uzozala akukho kuka 2-3. Amanani Umkhaya ibalulekile kubo, ngakho izingane zabo basuke zaziswe. Abantu bendawo abathanda ngokuvamile ubambe imikhosi ngokuhlanganyela.
AmaNtaliyane ukushada sekwephuzile - emva kweminyaka 25, futhi iphela lapho kumiswa iminyaka engaba ngu-30. Ngenxa yalokhu, abantu abasha lapho ushayele abangafika kwabangu-engu-40. Abamele lesi sizwe ujabule futhi bejabule.
Izinga lokuphila e-Italy kuqinisekisa uthando abakhileyo kuleli zwe ukuba ukudla okumnandi. Futhi njalo ngalesi sihloko, isibonelo, khuluma ngezinto izinga imikhiqizo.
Kukhona imithetho engabhaliwe ngemva kwesidlo. Ngokwesibonelo, kwasemini kwenzeka kungakapheli 12: 30-13: 30. Ngezinye izikhathi, yokudlela ivaliwe. Abantu bakule ndawo angisithandi uma umuntu ethulula isoso pasta noma pasta izincwadi hhayi njengendlela dish ehlukile.
Abaningi bakholelwa ukuthi ukukhanga wokuphila e-Italy-Russian. Izibuyekezo ngempela uqinisekise lesi. Abaningi bakhangwa ukuthi impilo ekhululekile ezweni. Lapha abantu abangekho ezisheshayo.
AmaNtaliyane abakwazi ukwenza izinqumo ngokushesha. Izinhlangano eziningi zikahulumeni uqale ukusebenza kuphela kusukela 9 ekuseni, futhi ngezinye 11 kukhona ikhefu siphuze ikhofi. Kweyesi-2 ntambama, abaningi uye endlini yakho. AmaNtaliyane abathanda uhlangane nabangani kanye nomndeni. Le ndlela yokuphila zisuthe ngempela, ngoba ikuvumela ukuba njalo ajabule. Ukuze izakhamuzi zendawo kubalulekile horoshoprovedennoe isikhathi kunokuba ezibonakalayo.
ukuphila Russian e-Italy kuyinto neze. Abantu badinga ukujwayela eyeqisayo esezikhona lizwe. Izakhamuzi sesihlasela ingxenye eseningizimu ye enyakatho kanye nezokulima kanye nokutholakala zezimboni akuyona kakhulu othanda nomunye. Northerners kudinga ukuqashelwa wokuzibusa. Izakhamuzi ezindaweni namalebula abo, futhi uma kwakukhona umhlangano zabantu base-Italy 2, ngamunye lowekucala kulokho idolobha womngane wakhe.
AmaNtaliyane bayazigqaja umlando sabo namasiko. izingane eziningi zinikezwa amagama eziye ngokwesiko ezithathwe endaweni ethile. Izakhamuzi kulelizwe ngokuvamile musa ezikhuluma ezinye izilimi. Nakuba lapha, futhi, baqonde ulimi lwesiNgisi, kodwa lisha ukhululekile ngaphezulu ulwazi Italy.
AmaNtaliyane ungafuni ukufunda ezinye izilimi, ngoba uyakuthanda kakhulu kuye. Futhi, abaningi babo bangabantu engathandi ukuthuthela kwelinye idolobha noma izwe. Akukhona nje abesifazane, kodwa iningi labesifazane e-Italy sigqoke kahle, ngoba ukunambitheka omuhle.
Uma kuqhathaniswa namanye amazwe, lapho uthanda ukhululekile, izingubo hhayi enhle, amaNtaliyane ungalokothi uphume emgwaqeni zokuphola. Babalulekile ukwamukela imibono yabanye, ngakho ngokucophelela ukuqapha ukubukeka.
Njengoba izakhamuzi Russian kuleli zwe, inani elikhulu, abaningi uyazibuza kanjani ukuphila Russian senzeka e-Italy. Kwaphela iminyaka eminingi lapha baye bathuthela eziningi abantu. Ubani owake wahlala ezweni, neze wakhuluma ngolimi lwabo lwendabuko. E-Italy ke baphinde ababaleki ngisho kwamanye amazwe. Kwakuhlangene bomnotho, ngenxa yalokho abantu kwakudingeka bafune insimu ophumelelako ukuphila.
Ababaleki Modern ngokuvamile ukuhambisa ngenxa yezizathu umndeni izinkinga zomnotho. wathutha Iningi - abesifazane. Kuningi balaba bantu abasebenza, ize ibe nemikhaya, kungukuthi uhlela ukuthuthela kuphi.
Lapho kukhona khona isiRashiya?
Abaningi bakholelwa ukuthi impilo elokuthula e-Italy. Izibuyekezo ababaleki futhi ukuqinisekisa lokhu. Iningi Russian aneliseke ezimpilweni zabo. Leli zwe abantu abaningi abafana ngenxa sezulu layo, nature enhle. eziphilayo Russian elisenyakatho ye-Italy - ETurin NaseMilan. Imihlambi yawo emincane ezakhamizi zethu nabo babe isakhiwo Abruzzo, Bari, Venice, nase-eRoma.
Hlobo luni lokuphila e-Italy I-Russian? Kubo, kukhona imiphakathi ehlukahlukene, ezifana "Association". Abaningi izinhlangano ukusebenza ukuze kulondolozwe isiRashiya namasiko. Iphinde isekela nokubambisana nayo Embassy Russian. Kukhona izikhungo wahlanganyela kule inhlangano amaholide izingane kwababaleki.
umphakathi Italian Russian
Kukhona amasayithi eziningana futhi izinkundla ukuthi ukukhonza sokuba umuntu afunde izindlela abaphilayo Russian e-Italy. Ngu ethandwa zihlanganisa lezi ezilandelayo:
Lawa masevisi abe nolwazi ngezindaba ezingokoqobo: umsebenzi, ukuthengwa imikhiqizo, obajwayele. Ezinganeni kukhona esikoleni Russian. Ngokuhamba kwesikhathi, nokuthi bangaya kubani izikole Italy ukuba baqonde kangcono ulimi lwasendaweni.
Russian bani emsebenzini?
Yini ekuphileni Russian e-Italy? Izibuyekezo basikisela ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe ukuba besebenza ongaphakeme okhokhela kakhulu. Lezi zihlanganisa abahlengikazi, abahlengikazi, abashayeli bamatekisi, oweta, nezincekukazi. Ukuze umsebenzi onjalo ngokuvamile akhokhe mayelana 1,000 euro ngenyanga. Demand nokwakha imisebenzi: omeselandi, saqeda wizadi. Nge imfundo ephakeme zingahlelwa ezinkampanini zamazwe ngamazwe. Nge ulwazi lwezilimi ingasebenza njengendlela umhumushi.
Ngomqondo onabile, kungenzeka ukuthola okuhle kuwo wonke umuntu ezweni like Italy. Impilo abantu lapho, Nokho, njengakwezinye izindawo, kuncike amazinga okuphila. Ukuze uthole isikhundla nge engenayo high, odinga ukukwazi isiNtaliyane, kanye ingeyakho ezingeni okuxoxa. Lokhu kusebenza futhi imisebenzi ezingenamakhono. Kuleli zwe, abaningi Russian behileleke nakwezamabhizinisi.
Abahola impesheni e-Italy
Njengakwamanye amazwe athuthukile, e-Italy uhlelo impesheni accumulative. Lokhu kusho ukuthi-ke incike ubukhulu iminikelo izimali. Kusukela 2012, kukhona izinguquko. Uma isakhamuzi iphumula ekuseni, isijeziso kuyinto 12% yenkokhelo.
Lapho ufika impesheni umhlalaphansi ikhokhiwe yonke. Njengoba isikhathi sokuphila ezweni kuphezulu, uhulumeni liyakhula engu-izinkokhelo. Ngakho, kusukela ngo-2017 umhlalaphansi kuzoqala nge-66 ubudala.
Izinga ohlala e-Italy lihlukile kwamanye amazwe. Lapha umhlalaphansi uzizwe amalungu agcwele umphakathi. Bakhokha zonke izinzuzo kunesidingo. Ngisho noma isakhamuzi ayisebenzanga, uyena onelungelo lokusho impesheni, ezifana emizi. Lezi inkokhelo eyenziwe ku abesifazane kusuka isikhwama esikhethekile.
izimpesheni Ubuncane ezikhokhwa labo ababengenawo umsebenzi ozinzile futhi abangahambi kukhokhelwe quota. I abathutha, kuhlanganise isiRashiya, uzothola i-impesheni isiNtaliyane, ubukhulu kunqunywa kuye ngobude. Ukukhokhwa impesheni zomphakathi inelungelo zonke owezizwe.
Njengoba Russian nabezizwe baqonde nomunye?
Yiziphi izici zokuphila e-Italy? Russian akulula kangako ukujwayela indlela yezwe. AmaNtaliyane abantu abanobungane, kodwa kuningi kwenkolelo engaguqukiyo yabo mayelana Russia. Babefuna ikakhulukazi sezulu yezwe. Mhlawumbe, njengoba kusondela abendawo uzokubuza sezulu eRussia.
Emikhayeni Italian enyakatho abandayo. Ngokomthetho, lokushisa ekamelweni Kufanele ube ngaphezulu 22 degrees. Ngu Imiphumela lomhlangano ukunquma lapho ukusebenza bafudumale. nzima Russian ukujwayela imithetho eziningi zokuphila ngendlela amaNtaliyane, isikhathi.
Kuleli zwe, nenchubokuphatsa bonke kubo mubi kunothango kwamanye amazwe, kodwa abendawo Akungikhathazi. Bazimisele ume emgqeni, iya inhlangano ngemva kwenye. Ezinye amadokhumenti, ezifana esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi, kufanele ulinde kweminyaka eminingi kangaka.
Nakuba isiRashiya futhi ejwayele ubushiqela, kodwa ukwephuza zabantu e-Italy bangase kuholele ukucasuka. Futhi kuhluke kanye nemithetho ezahlukahlukene empilweni. Ngokwesibonelo, azikho izitolo lula.
Ukufunda izilimi zendawo
ulimi Literary sekufikile kibo bonke izakhamuzi zezwe eyaziwa, kodwa kusuka ebuntwaneni bekhulumisana ngolimi lwabo lwesigodi bomdabu. Lapho ethutha Russian Italy unomphela, kubalulekile ukufunda hhayi kuphela ulimi tetemibhalo, kodwa futhi ulimi lwesigodi wendawo. By the way, ukukhuluma ngendlela ehlukile ezibhekwa bezinye izizwe. Emikhayeni Italian ngokuvamile bathi ngolimi.
zokuxhumana Russian kungase kubonakale ezigcawugcawu. AmaNtaliyane gesticulate eningi, bathi eziningi amazwi izincomo. Nabo sebelithathile angiqabule mutual basanga. Kubo, lokho kubhekwa njengokuzijabulisa isiko ezivamile.
Cishe wonke umuntu wathuthela e-Italy ukuze yokuhlala unomphela, bakholelwa ukuthi iRussia awukwazi ukhohlwe. Kungakhathaliseki imali kungase kube futhi kungakhathaliseki kahle kanjani sasiwumsebenzi ukukhuluma kahle ulimi lwendawo, Russian njalo ezigqanyisiwe. Kodwa cishe akekho ofuna ibuye ibuye, ngoba ungathola umsebenzi ophambili kuleli zwe, ikakhulukazi labo babe imfundo ephakeme. Futhi-ke ifanele zokuphila eziningi. Ngakho-ke, iningi labo wathuthela e-Italy, ngokuvamile ukuza Russia ngesikhathi noma ukuvakashela izihlobo, bese futhi ngokushesha ezweni ajwayelekile.
amanani okudla ezomhlaba akuzona eliphezulu kakhulu uma ziqhathaniswa EC, kanye ukukhokhela izinsiza Umbuso indawo. yemizi yerenti, yebo, kuyabiza, kodwa konke kuncike indawo. amanani okudla ziphezulu uma ziqhathaniswa Russia, kodwa yebo, futhi ukudla yekhwalithi ephezulu. Izinsiza ziphakeme kunezindlela ezifuywayo, kodwa futhi amaholo kanye izimpesheni ngeke kuqhathaniswe nge Russian. Kungenxa imali eyiphinda okusezingeni eliphezulu futhi eziningi zithatha isinqumo sokuthutha.
Ubani angaya Italy?
Nakuba izwe akuyona uyabuya eliphezulu kakhulu uma siqhathanisa nabanye, kusiza okwengeziwe kulokhu, emazweni Europe, kodwa abaningi-Russian, Ukraine futhi Belarusians ukuza izwe zokuhlala unomphela. Ikakhulukazi ngoba akudingeki ukuba bangayeki ubuzwe bazo. Ukuze uhlale ezweni isikhathi eside, kufanele uhlangabezane omunye nalezi zidingo ezilandelayo:
ukuhambisa ngenhloso kokuhlanganiswa umndeni;
isisekelo ibhizinisi layo;
Uma isimo okungenani oyedwa wanelisekile, kungenzeka ukuthuthela e-Italy. Ngemva hambisa kuyadingeka ukuhlola ukuphila kuleli zwe. E-Italy, ungathola umsebenzi okukhethekile yabo, kanye ukuyothola imfundo. Ezinye uphathe ukuqala amabhizinisi abo siqu, ezifana izitolo noma kunoma iyiphi inhlangano. Konke kuncike nokuzimisela ikhono zezimali.
Emihle nemibi ohlala e-Italy
Yiqiniso, ukuphila e-Italy has ngobuhle nangobubi bawo. Ngaphambi ukuthuthela ezweni, kufanele inake izici eziningi. Kukhona umnotho, ngakho inkokhelo ukunikeza ukuba baphile kahle. E-Italy, izinto eziningi ezikhangayo. Ukuhlala kuleli lizwe, ungakwazi ukuhamba kwamanye amazwe. Izinzuzo zihlanganisa ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala, kufaka phakathi abantu bakwamanye amazwe. Odokotela afeze usizo ngesikhathi esifanele futhi izinga kubantu etimeni letehlukene.
imikhiqizo high quality lapha, ngoba lokhu, futhi ejwayelekile ehloniphekile nawo ezingeni lekuphila. Izwe inesimo sezulu emangalisayo, kukhona ulwandle, amachibi nezintaba ezingaphansi kolwandle. AmaNtaliyane abantu friendly futhi ziziphatha kahle, ngakho-ke ungenza uthando enhle ngaphandle kwezinkinga. Ayikho sengqondo okungafanele ukuba abantu, kuhlanganise nalabo nezikhungo zomphakathi. Indlela yokuphila kwabantu bendawo lizisho ujabulela zonke izinsuku, lapho kungaba kuwufanele ukufunda kusuka izakhamuzi nakwamanye amazwe amaningi.
Kodwa ngisho phakathi inombolo enkulu kangaka izinzuzo, zikhona yokuntula. Lezi zihlanganisa bomnotho nabo kanye nokungabibikho kwemisebenzi. Hhayi kulula ukuthola umsebenzi ngoba abaqashi abaningi bazimisele ukuzifaka isikhundla sabantu zabo. E-Italy, kukhona amanani aphezulu ingcebo, kuhlanganise ziklebhukile, eqinisweni khona isikhala ephilayo ibalulekile. Ngaphambi kokuya lizwe, kubalulekile ukufunda ulimi lwendawo.
Akuwona wonke umuntu ophethe ukuzivumelanisa Ubumnene Russian bendawo. Izinhlangano ubushiqela nokubusa, futhi ukusebenza izinqubo eziningi kunezinxushunxushu. Abezinye Izizwe ngokuvamile ekhishwe impesheni ubuncane. Futhi kudingeka ukuqinisekisa neziqu nemfundo.
Ingabe izakhamuzi Italy abakhona zonke izinhlobo amalungelo nezinzuzo zezenhlalo. Kuthathwa inzuzo enkulu komthetho wendawo. Futhi yize kukhona Ukukhetha kwabokufika, kodwa abantu Russian baqonde ukuthi Italy izimo zokuphila eyamukelekayo. Ngenxa yalokhu, bakhetha kuleli zwe futhi ungafuni ukuhambisa kuphi. Ekuthuthukisweni komnotho welizwe kubhekwa ngenxa yezizathu eziningi ezinhle baphile lapha ukuthuthukisa ibhizinisi siqu.
Isondlo sengane uma ubaba akusebenzi. Indlela ukuqoqa imali abangasebenzi?
Emahhotela aphambili e Pitsunda ogwini: uhlu, incazelo kanye nokubuyekeza
Lamborghini Huracán - Supercar entsha umenzi Italy
Petar Brzica nokuqothulwa kohlanga abantu Serbian